News - Saameynta Covid 19 ee Suuqa Mashiinka Mindhicirka Mashiinka-Warbixinta Warshadaha Caalamiga 2030
Cudurka faafa ee COVID-19 (coronavirus) wuxuu laba jibaaray baahida loo qabo dharbaaxo, baakadaha dabacsan iyo mashiinada cabitaanka. Maaddaama macaamiishu ay dalbanayaan baahiyo ay ka mid yihiin saabuun, jeermis-dile iyo alaabooyin kale oo nadaafadeed ah, baahida loo qabo mashiinnada wax lagu duubo ee kala duwanaanta ah sida fiditaanka duritaanka iyo fiditaanka jirka ayaa kor u kacay. Baahida aan horay loo arag ee alaabada nadiifinta iyo jeermiska ayaa fursado u abuurtay shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu shubo ee dharbaaxo si ay u qabtaan qiimaha. Maaddaama shaqsiyaadku waqtigooda intiisa badan ku qaataan gooni-u-goosadka, baahida loo qabo cabitaannada sida casiirka, biyaha iyo biirka ayaa sidoo kale koraya.
Maaddaama dadku ay si dhakhso leh u dhammaystirayaan alaabadooda aasaasiga ah, mashiinnada wax lagu duubo ee loo isticmaalo soo saaridda sanduuqyada ayaa sidoo kale noqon doona kuwo baahi badan qaba. Sidel, oo ah soosaaraha nidaamyada wax lagu duubo ee fidiya, ayaa xarunteeda caalamiga ah ee heer sare u beddelay xarun wax soo saar loogu talagalay dhalooyinka gacmaha lagu nadiifiyo ee PET (polyetylen terephehalate). Sidaa darteed, suuqa mashiinka wax taaj oo kale dharbaaxo ayaa la filayaa inuu goobjoog u noqdo koritaanka weyn inta lagu jiro muddada saadaasha.
Cusbooneysiinta mashiinnada wax taaj oo kale oo dharbaaxo ah ayaa sii kordheysa. Mashiinadan ayaa soo jiitay dareenka maalgashadayaasha sababtoo ah nidaamyadan ayaa awood u leh inay soo saaraan dhalooyin tayo sare leh oo loogu talagalay cuntada, baakadaha iyo codsiyada gaadiidka. Suuqa mashiinka wax lagu karsado ee dharbaaxo ayaa la filayaa inuu qaan gaadho iyadoo la hagaajinayo saxnaanta nidaamka iyo xawaaraha, wuxuuna gaari doonaa qiime dhan 65.1 bilyan oo doolarka Mareykanka marka la gaaro sanadka 2030. Soosaarayaasha caaga waxay door bidaan dabacsanaanta iyo soo noqoshada mashiinada wax ku duubaya ee fidsan. Tikniyoolajiyadda kacaanka ee mashiinka waxay u abuureysaa fursado badan shirkadaha shirkadaha baabuurta, sharaabka, daryeelka caafimaadka, iyo warshadaha qurxinta.
Suuqa mashiinka wax lagu duubo, dhacdada ugu weyn ee cavitation ayaa soo jiidatay dareenka maalgashadayaasha. Shirkadda wax soo saarka mashiinnada ee Canadian Pet All Manufacturing Inc. waxay si karti sare leh u horumarinaysaa mashiinnada wax isku dhejinta ee dhirbaaxo-xawaare sare leh si loo hubiyo in isbeddelada caaryadu si deg deg ah u dhacaan iyadoo aan loo baahnayn qalab. Sidaa darteed, soosaarayaasha balaastigga ah waxay ogaadeen qiimaha wax ku oolnimada iyo xawaaraha sare ee mashiinnada wax taaj oo kale oo isdabajoog ah.
Mashiinnada wax ku duubaya ee afuufka ah waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha cabitaanka iyo codsiyada aan cabitaanka ahayn. Si kastaba ha noqotee, soosaarayaasha caagga ah, dayactirka joogtada ah ee hawada cufan waxay noqon kartaa caqabad. Sidaa darteed, shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu karsado waxay ku darayaan nidaamyo cadaadis hooseeya oo sarreeya oo aan saameyn ku yeelan howlaha kale. Maaddaama codsiyada wax-ka-beddelka PET ay si dhakhso leh u kobcayaan, soo saarayaasha ayaa kordhinaya awooddooda R&D si ay u horumariyaan mashiinnada wax ku oolka ah ee dharbaaxo sare leh.
Shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu shubo dharbaaxada ayaa horumarinaya nidaamyo si fiican ugu habboon dib u soo celinta hawo cufan, taas oo hubinaysa in hawada dib loogu celiyo nidaamka cadaadiska hoose ee warshadda. Taangiyada keydinta hawada ee maxalliga ah iyo qaybaha hawo-mareenka ku habboon ayaa gacan ka geysan kara yareynta dhibcaha cadaadiska ee codsiyada wax-ka-qabashada PET. Soo-saaraha mashiinku waa inuu la tashado khubaro si loo aqoonsado loona cabbiro hoos u dhaca cadaadiska ku jira mashiinka wax lagu shubo.
La soco noocyada kale? Ka codso warbixin habeysan suuqa mashiinka wax taaj oo kale
Suuqa mashiinka wax lagu nadiifiyo dharbaaxo ayaa ku socota isbedelo, soo bandhigaya tikniyoolajiyad cusub oo xumbo cusub leh oo dhaqaale leh. Tusaale ahaan, bixiyaha xalka tiknoolajiyada wax lagu nadiifiyo ee W.MÜLLER GmbH waxaa ka go'an inuu si guul leh ugu xumeeyo weelasha caaryada dharbaaxo leh tikniyoolajiyadeeda saddexda lakab ah. Lakabka khafiifka ah ee daboolaya oo ay weheliso udub-dhexaadka xumbo wuxuu hubiyaa adkaanta sare ee weelka waxayna ka caawisaa yareynta culeyskiisa.
Tikniyoolajiyadda wax lagu duubo ee casriga ah ayaa baabi'ineysa baahida loo qabo walxaha kiimikada afuufa. Walxaha kiimikada afuufaya, lakabka dhexe ee weelka waxaa ku xiiqan nitrogen-ka geedi socod ahaan jir ahaan. Tiknoolajiyaddani waa calaamad wanaagsan oo loogu talagalay shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu nadiifiyo, sababtoo ah tiknoolajiyaddan deegaanka u habboon waxay raacaysaa sharciyada baakadaha cuntada ee hadda jira. Dhalooyinka xumbo waxay u baahan yihiin wareeg yar iyo waqti is afuufin, taas oo gacan ka geysaneysa xaqiijinta caqliga dhaqaale ee qalabka.
Mashiinnada wax ku duubaya oo dhan-koronto ayaa u abuuraya fursado ganacsi shirkadda. Parker caaga Makiinado Co., Ltd. waa soo saaraha xirfadle ah ee xalkeyga mashiinnada mashiinada wax taaj oo kale dharbaaxo ee Taiwan. Waxay ku dhiirrigelineysaa mashiinnada wax ku oolka ah ee dhan-koronto ku shaqeeya suuqa waxayna caan ku tahay waxqabadka sare ee nidaamka keydinta tamarta. Marka loo barbardhigo makiinadaha dhaqameed ee hidda-dhaqameedka, shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu nadiifiyo waxay kordhinayaan awooddooda wax-soo-saar si ay u soo saaraan nidaamyo tamar-hoose oo dhan ah.
Mashiinnada wax ku duubaya oo dhan oo koronto leh oo leh kharashyo dayactir oo aad u hooseeya ayaa ah xulashada koowaad ee soosaarayaasha caagga ah maxaa yeelay nidaamyadani ma keenaan wasakhda saliidda. Shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax taaj oo kale dharbaaxo diiradda nidaamka oo dhan-koronto. Nidaamyadani ma sababi doonaan daadashada saliidda waxayna keydinayaan kharashka dayactirka ee soo saarayaasha caagga ah.
Ku daadinta hal-abuurnimada mashiinada wax taaj oo kale oo isdaba-joog ah waxay u baahan tahay sannado khibrad injineernimo ah Tech-Long Inc.-Soosaaraha Aasiyaanka ee mashiinada baakadaha cabitaanada, oo leh aasaas ganacsi oo adag Mareykanka iyo Yurub, wuxuuna soosaarayaa mashiinka wax ku duubaya, kaas oo soo saari kara dhalooyin fidsan oo loogu talagalay codsiyada cabitaanka iyo kuwa aan cabitaanka aheyn iyo konteynarada waaweyn. Shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu nadiifiyo dharbaaxo ayaa qaabeynaya nidaamyo si ay u soo saaraan dhalooyin aan caadi ahayn oo ku saleysan tikniyoolajiyadda kuleylka mudnaanta leh.
Dhinaca kale, shirkadaha ku jira suuqa mashiinka wax lagu karsado waxay hagaajinayaan awooddooda inay soo saaraan nidaamyo isku dhafan. Waxay ku takhasusaan mashiinnada buuxin kara shuruudaha polyetylen, polyetylen terephthalate iyo qalabka polyvinyl chloride. Soo-saareyaasha qalabka ayaa sahaminaya fursado badan iyaga oo horumarinaya nidaamyo soo saara haamaha saliidda, weelasha saliidda la cuni karo, qalabka carruurtu ku ciyaarto iyo weelasha guryaha.
Baahida aan horay loo arag ee jeermiska iyo waxyaabaha nadiifinta ayaa horseeday korsashada mashiinada wax lagu shubo si loogu sameeyo saabuunada gacanta, jeermiska lagu nadiifiyo iyo hydrogels. Nidaamyada wax taaj oo kale oo dhan-koronto ayaa si aad ah caan ugu noqonaya suuqa. Inta lagu jiro muddada saadaasha, suuqa mashiinka wax lagu karsado dharbaaxo ayaa la filayaa inuu ku koco heer dhexdhexaad sanadle ah oo dhexdhexaad ah oo qiyaastii ah 4%. Sidaa darteed, balaadhinta aan la saadaalin karin ee tiknoolajiyada wax ku sameynta extrusion ee loo yaqaan 'ballaarinta dhinta' ayaa caqabad ku noqotay wax soo saarka balaastigga. Sidaa darteed, shirkaduhu waa inay aqbalaan ka weecashada weyn ee cabirka wax soo saarka ama dulqaadka si looga fogaado dhibaatooyinka ballaarinta caaryada. Astaamaha qiimaha jaban ee tikniyoolajiyadda wax lagu duubo ee extrusion waxay kaliftay baahida loo qabo mashiinada wax lagu miiro dharbaaxo.
Warbixinno isbeddello dheeri ah oo ka yimid Cilmi-baarista Suuqa Transparent - https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/stellar-22-cagr-set-to-propel-transparent-ceramics-market-forward-from-2019-to - 2027-tmr-804840555.html
Xaddidaadda ka shaqeynta mashiinnada wax taaj oo kale oo dharbaaxo leh iyo jiritaanka waxyaabo kale ayaa caqabad ku ah koritaanka suuqa mashiinka wax taaj oo kale ah
Dhexgalka suuqa iyo horumarinta wax soo saarka ayaa siinaya fursado suuqa mashiinka wax taaj oo kale dharbaaxo
Codsiga falanqaynta saameynta covid19 - https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=65039